देशी/विदेशी शक्ति पैसाको झोलासहितको गाडीमा केही जसपा सांसदको घरदैलो गर्दैछ : पाण्डे « रिपोर्टर्स नेपाल
देशी/विदेशी शक्ति पैसाको झोलासहितको गाडीमा केही जसपा सांसदको घरदैलो गर्दैछ : पाण्डे
काठमाडौं, २१ बैशाख । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटको संघारमा पुगेको छ । जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईनिकट नेता विश्वदिप पाण्डेले यस्तो संकेत गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत पाण्डेले नेपालको संसदीय राजनीतिमा फेरि फोहोरी खेल सुरु भएको हो । उनले लेखेका छन्–‘काँग्रेस एमालेको विकल्प दिन भनेर राजनीतिमा उदाउने उद्घोष गरेको जसपा नेपाल करिब करिब फुटको संघारमा पुगेको छ । हामी सकभर फुट रोक्न प्रयासरत त छौं तर हिजो बेलुकादेखि देशी(विदेशी शक्तिहरू पैसाको झोलासहितको गाडीमा केही सांसद र कार्यकारिणी समिति सदस्यको घरदैलो गर्दैछ ।’
नेपालको संसदीय राजनीतिमा पजेरो काण्ड, बैङ्कक काण्ड, सुरासुन्दरी काण्डलगायतका अनेकन कुख्यात काण्डहरूले कालो दाग छोडेका छन् । यो बीचमा नेपालको नदीनालामा निकै पानी बग्यो । पानी मात्रै होइन, हजारौं नेपालीको रगत र पसिना पनि बग्यो । व्यवस्था परिवर्तन गर्ने क्रान्ति र आन्दोलनहरु भए । जसले संसदीय राजनीतिमा लागेको त्यो दाग मेट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सुसंस्कृत राजनीति मार्फत । तर विडम्बना ती घृणा गर्न र बिर्सनलायक सबै काण्डलाई माथ गर्ने खालको, संसदीय राजनीतिलाई थप विकृत बनाउने कुकृत्य नेपाली राजनीतिमा पुनः हुन थालेको छ ।
सत्तासीन पार्टी आफू सत्तामा टिकिराख्न जुनसुकै स्तरमा गिर्न पनि तयार भएर आएको छ । प्रतिपक्षी दल पनि अराजनीतिक नाङ्गो नाँच हेरेर आनन्द मानिरहेको छ । काँग्रेस एमालेको विकल्प दिन भनेर राजनीतिमा उदाउने उद्घोष गरेको जसपा नेपाल करिब करिब फुटको संघारमा पुगेको छ । हामी सकभर फुट रोक्न प्रयासरत त छौं तर हिजो बेलुकादेखि देशी-विदेशी शक्तिहरू पैसाको झोलासहितको गाडीमा केही सांसद र कार्यकारिणी समिति सदस्यको घरदैलो गर्दैछ । त्यो पैसाको झोला फिर्ता गर्ने सांसद/कार्यकारी समिति सदस्यलाई अनेकन डर र त्रास देखाइएको छ । यस्तो स्थितिमा जसपा फुटमा रमाउने भन्दा पनि लोकतन्त्र बचाउन र सुसंस्कृत राजनीति गर्नतर्फ लागौं ! यो जसपाको मात्रै सरोकारको विषय होइन, पूरै लोकतन्त्र र देशको राजनीति कता लैजाने भन्ने गम्भीर विषय हो । यस्तो दुष्प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने दुई दशकअघिको राजनैतिक कुसंस्कार थप झ्याँङ्गिदै जानेछ । क्रान्ति र आन्दोलनमा भएका वलिदानहरू खेर जानेछ । जनताका अपेक्षाहरू धुमिल हुनेछ । त्यसकारण यसलाई बेलैमा रोकौं, सबै सचेत बनौं । हाम्रो पुस्ता त यस्तै भयो, कम्तिमा हुर्कँदै गरेको भावी पुस्ताको लागि सोचौं ।
काठमाडौं, २३ बैशाख । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता, सांसद तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २३ बैशाख ।नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका
ओलीले माधव नेपालसँग भोलि निर्णायक वार्ता गर्ने, कारबाही फुकुवा गर्नेबारे छलफल !
काठमाडौं, २३ बैशाख । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता माधव
काठमाडौँ, २३ वैशाख: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोरोना भाइरसविरुद्ध एक जुट हुन सबै
बढी शुल्क लिने अस्पताललाई कारवाही हुन्छः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
काठमाडौँ, २३ वैशाख: उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने निजी अस्पताललाई कारवाही
काठमाडौं, २३ बैशाख । मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक
काठमाडौं, २३ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।